avril 2013 – filazantsaramada
FANILON’ NY TONGOTRO SY FANAZAVANA NY LALAKO NY TENINAO
Misy fotoana andehanana amin’ny maizina, ary tena miraparapa sy tsy hita izay ametrahana ny tongotra. Mety ho tafintohin’ny vato mihintsy aza ka maratra ny lohalika. Eo amin’ny fiainantsika dia misy fotoana toy izany diavintsika ara-panahy. Toa latsaka an-davaka lalina ny Fanahintsika. Eo no ilàna ny Tenin’Andriamanitra: hanazava antsika, hampahery antsika! Hanarina antsika raha sendra lavo! […]
Publié parfilazantsaramada avril 26, 2013 mai 31, 2013 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur FANILON’ NY TONGOTRO SY FANAZAVANA NY LALAKO NY TENINAO
Raha tsiahivina Anisan’ny Ivontoerana miara-miasa mavitrika amin’ny Feon’ny Filazantsara ny Lycée Nanisana. Ny fikendren’ny roa tonta dia ny hisian’ny fitaizàna mifanindran-dalana eo amin’ny lafiny saina sy vatana ary fanahy eo anivon’ny sekoly. Efa nanomboka ny taona 2008 ny fiaraha-miasa tamin’ny alalan’ny “Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana” (FSMI) na ny Cours Biblique par Correspondance. Nihitatra tamin’ny fandefasana […]
Publié parfilazantsaramada avril 24, 2013 septembre 30, 2013 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur HIDERA AN’I JEHOVAH LALANDAVA AHO
Fiaraha-miombon’antoka Fileovan’Ankatso (SPAnta) / Feon’ny Filazantsara
Tanteraka soa aman-tsara ny 18-19-20 martsa 2013 teo ny Fampiofanana niarahana tamin’ny Fitandremana Ambolokandrina, Fileovana Ankatso. Santatra indray eo amin’ny fanohizana sy ny fivelaran’ny fiaraha-miombon’antoka amin’ny Fiangonana Loterana ato amin’ny Synodam-Paritany Antananarivo (SPAnta) raha somary niato izany tao anatin’ny taona vitsivitsy. 35 ny isan’ireo mpandray anjara ka solon-tena avy amin’ny sampana sy rantsana samihafa ao […]
Publié parfilazantsaramada avril 22, 2013 septembre 30, 2013 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Fiaraha-miombon’antoka Fileovan’Ankatso (SPAnta) / Feon’ny Filazantsara
« Tsy voalazako va fa raha hino hianao, dia ho hitanao ny voninahitr’ Andriamanitra? » Jaona 11:40 Hoy tokoa mantsy i Maria tamin’ny maty i Lazarosy anadahiny: « Tompoko, maimbo izy izao », satria Jesosy niteny mba hanesorana ny vato. Nino i Maria fa afaka nanasitrana an’i Lazarosy i Jesosy, fa tsy nino kosa izy fa afaka nampitsangana an’i […]
Publié parfilazantsaramada avril 19, 2013 mai 31, 2013 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY FINOANA SY NY VONINAHITR’ANDRIAMANITRA
« Izaho no Mpiandry tsara; ny Mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry » Jaona10:11 Jesosy Kristy no miteny eto, ary manambara ny tenany Izy. Izaho no Mpiandry tsara. Inona moa no andrasana? Ny andrasan’ny mpiandry eto dia ny ondry. Jesosy dia manambara fa Izy no Mpiandry tsara. Ny ondry mantsy dia karazana biby mora azon’ny fahavalony, ary fahavalony dia matetika ny […]
Publié parfilazantsaramada avril 12, 2013 mai 31, 2013 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Jesosy no Mpiandry Tsara
Hoy Jesosy taminy: Satria nahita Ahy hianao, dia nino; sambatra kosa izay tsy nahita, nefa nino. Jaona 20: 29 Jesosy maty ary nitsangana tamin’ny maty. Nihorohoro ny mpianatra, ary tsy ho hitany intsony ny Mpampianatra azy ireo, izay nitaiza azy sy nikolokolo azy, koa sady nalahelo izy ireo no nihorohoro noho ny tahotra ny Jiosy, […]
Publié parfilazantsaramada avril 7, 2013 mai 31, 2013 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Sambatra izay tsy nahita nefa nino
Esory ny masirasira ela, mba ho vongana vaovao hianareo, araka izay tsy maha-misy masirasira anareo. Fa voavono Kristy, Paska ho antsika. I Kor 5: 7 Amin’ny fomba fanaovana mofo raha tiana hitombo sy hahazo tsirony araka izay tiana dia asiana masirasira, na koa lalivay araka izay iantsoana azy, ny koba ampiasaina. Rehefa asiana ny lalivay sy rano mafana ny koba […]
Publié parfilazantsaramada avril 2, 2013 mai 31, 2013 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Esory ny masirasira ela